Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Italy War Deg Deg Ah » Socodkii 3200-kiilomitir wuxuu dib u bilaabay Dalxiiskii Gaabnaa
Safarka Dalxiiska • Jebinta Wararka Caalamka • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • Italy War Deg Deg Ah • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Wadada gaabisa dalxiiska
Maaddaama hal koox ay 8 maalmood ku safrayeen Via Francisca ee Lucomagno, koox kale ku dhawaad ​​2 bilood ayaa ku sii jeeday Rome ka dib markii ay ka tageen Canterbury. Labada kooxood ee dadka lugeeya ayaa qayb ka ahaa dalxiiska gaabiska ah ee "Waddada Rome 2. Mar kale bilow!"
Labada kooxood waxay ku biireen Pavia, caasimadda Lombard, si dib loogu bilaabo dalxiiskii gaabiska ahaa.
Kuwani waxay ahaayeen 2 safar oo aad u kala duwan oo leh hal hadaf: in kor loo qaado safarka laftiisa - dalxiis gaabis ah, tusaale ahaan sidoo kale loo yaqaan socod.
Kobcinta dhaqanka iyo waarta ee dhulalka laga gudbo geedi socodka ayaa noqonaya mid caan ah.
Koox kasta waxay ka tagtay goobo kala duwan ka dibna waxay ku kulmeen Talaadadii, Ogosto 10, Pavia kadib maalmo socod ah. Hal koox ayaa ka koobnaa xubno ka tirsan AEVF, Ururka Yurub ee Vie Francigene, kuwaas oo doortay inay u dabaaldegaan sannad -guuradii labaatanaad ee safarka ah 3,200 kiiloomitir. Kooxda kale waxay qaadatay safar 8 maalmood ah Via Francisca del Lucomagno-socdaal isku xira harada Constance ilaa harada Lugano iyo tan dambe ee Pavia, ka dib markii ay ka gudubtay Lombardy dhanka waqooyi ilaa koonfur iyada oo loo marayo jardiinooyinka iyo goobaha UNESCO. Via Francisca del Lucomagno waa socdaal qadiimi ah oo ku xirnaa bartamaha Yurub iyo Rome.
Labada xaqiiqood waxay ahaayeen saaxiibo in muddo ah, sidoo kale wakiiladooda, Massimo Tedeschi madaxweynaha AEVF, iyo Marco Giovannelli iyo Ferruccio Maruca (siday u kala horreeyaan qoraaga hagaha iyo xoghayaha miiska hay'adaha) ee Via Francisca del Lucomagno.
"Waxaan si gaar ah u abaabulnay bixitaanka kooxdan xujaajta ah oo ka yimid Lavena Ponte Tresa (Varese), joogitaankii ugu horreeyay ee Talyaaniga ee Via Francisca del Lucomagno, si aan ula kulano xujaajta Jidka Rome, ” ayuu sharraxay Marco Giovannelli.
“Waa daqiiqad muujineysa dib -u -bilaabashada ka dib daqiiqad adag. Dalxiis gaabis ah socodkuna wuxuu kuu oggolaanayaa inaad la kulanto oo aad ku raaxaysato dhulalka, ”ayuu yiri Massimo Tedeschi,“ iyadoo la tixgelinayo in xujayda iyo socdaalka noocan ahi ay kor u qaadaan wadahadalka u dhexeeya dhaqamada Yurub iyo dhaqaalaha maxalliga ah. ”
Via Francigena waxay ka socotaa England, halkaas oo ay ku leedahay "0 km" horteeda Cathedral -ka Canterbury, ilaa Rome iyada oo loo marayo gobollo badan, oo ay ku jiraan Faransiiska iyo Switzerland waxayna sii wadaa safarkeeda ilaa Santa Maria di Leuca, (Puglia) finibus terrae , Talyaani (dhammaadka Dhulka), waxaa mahad leh fidinta Via Francigena ee koonfurta. Ururka oo kor u qaadayay muddo 20 sano ah ayaa u dabbaaldegaya dhalashadan muhiimka ah isaga oo ku socda gebi ahaanba - safar ah 3,200 kiiloomitir guud ahaan Yurub.
Via Francisca del (ee) Lucomagno beddelkeeda waxay ka bilaabataa Jarmalka, si hufanna uga timaadaa harada Constance, ka dibna waxay dhaaftaa Canton of Grisons iyo Canton of Ticino (Switzerland), iyada oo marinna Liechtenstein. Ka gudbaya Lucomagno Pass, oo magaceeda lagu leeyahay, ka dibna wuxuu ka soo galaa Talyaaniga Lake Lake Ceresio.
Waxay ahayd halkaan in 10 -kii xujey ee Trentino, Campania, iyo Lombardy ay u dhaqaaqeen inay ku biiraan “asxaabta” Waddada Rome.
Tani waxay ahayd daqiiqad astaan ​​u ah oo mar kale hoosta ka xarriiqaysa sida waayo -aragnimada noocan ah, waddooyinku, dadka u geliyaan xarunta. Kulanka dhexdooda ah iyo dhaqamada ay matalaan ayagoo keenaya tamar muhiim ah oo waarta dhulalka ay maraan ayaa ah waxa muhiimka ah. Farxad u leh aqoonsiga ugu mudan ee safarka wanaagsan iyo dalxiiska oo gaabis ah sida ugu fiican.